एजेन्सी। अहिले प्राय सबैको हातहातमा मोबाइल अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। मानिसहरुले कहिलेकाही गल्तीले पनि पानीमा मोबाइल खसाल्ने गर्दछन् वा भनौ वर्षामा पनि झर्न सक्छ। त्यतिबेला सबै जना प्राय आत्तिने गर्दछन की मोबाइललाई कसरी बचाउने ? तर चिन्ता नलिनुस् पानीमा मोबाइल खसे पनि तपाई तत्काल यी उपायहरु अपनाउनुस्..
५. तपाईको फोनमा पसेको पानी हटाउन तपाईले भ्याकुम क्लिनरको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग २० मिनेटसम्म मोबाइल भ्याकुम क्लिनरमा राखेमा यसले मोबाइललाई पानी सोस्ने काम गर्छ। तर धेरै बेर नराख्नुस् । यसले फेरि तपाईको मोबाइलमा नोक्सान पनि पुर्याउन सक्छ।
६. फोनलाई सुख्खा बनाउनको लागि तपाईले हेयर ड्रायरको समेत प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। यो अलिक तातो हावा फ्याक्ने हुनेहुँदा यसको होसयारीपूर्वक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
७. जब तपाई सबै पार्ट्सलाई पुछेर सिध्याउनुहुन्छ तब मोबाइललाई केही बेर घाममा सुकाउनुहोस्। यदि त्यो भन्दा पनि अलिक धेरै पानी पसेको भए त्यो सूर्यको करणले सोस्‍न मद्दत गर्नेछ।
८. पानीबाट निकालेको मोबाइलमा २४ घण्टासम्म ब्याट्री नगाउनुहोस्। जब तपाईले मोबाइलमा सबै पानी सुकिसकेको अनुभव गर्नुहुन्छ। तब मात्रै ब्याट्री लगाउनुस् तर त्यो भन्दा अगाडी मोबाइल चार्ज भने अवश्य गर्नुहोस् । यदि यसो गरेमा पनि तपाईको मोबाइलमा कुनै खराबी देखिएमा नजिकैको मोबाइल सर्भिस सेन्टरमा लिसएर देखाउनुहोस् । मेकानिकलाई सबै कुरा नढाटी भन्नुस्।। तपाईको मोबाइल बन्ने सभावना धेरै रहनेछ।
यी बार जन्मने मानिस हुन्छन अत्यन्तै चमत्कारी र अत्यधिक सफल, यस्ता हुन्छन यिनीहरुको स्वभाब र गुण